~ ဏီလင်းညို ~: အလိုချင်ဆုံးသော...
အမှောင်ရိပ်တွေ ဖုံးလွမ်းတတ်နေတဲ့ ကမ္ဘာမှာ
မီးစလေး တစ်စအဖြစ် လင်းဖျာနေခဲ့ချင်ပေမယ့်....
အန္တရာယ်ဆိုးတွေကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်မယ့် လက်တစ်စုံကို
ရွာချလိုက်မိတဲ့ ‘စေတနာ’ မိုးစက်တွေဟာ...
‘ဥပေက္ခာ’ ပေစွန်းနေတဲ့ ခွက်နဲ့သာ ခံယူလာခဲ့ကြလေတော့တယ်...။
လိုချင်နေတဲ့ အရာမှန်သမျှသာ ငါ့... ထံမှာရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင်
မင်းရဲ့ အရေပြားပါးပါးလေးအောက်မှာ အမှန်ရှိနေခဲ့တဲ့....
ရိုးသားခြင်း...၊ မရိုးသားခြင်း ဆိုတဲ့ ‘ဗိုင်းရပ်(စ်)’ တွေကို
ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း မပြုနိုင်လောက်အောင်
ငါ ကိုယ်တိုင်ပဲ အာခံ တော်လှန်ထားခဲ့တယ်...။
ရံဖန် ရံခါဆိုသလိုမျိုး အငိုက်မိချိန်တွေမှာ...
အမှတ်မထင် ကျွတ်ကျလာတတ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေကို
သေချာစွာ ငါ... စောင့်ဖမ်းကြည့်မနေခဲ့ပေမယ့်...
‘ပြာ’ကျသွားစေနိုင်တဲ့ ‘ရမ္မက်မီး’ တစ်ချို့ဟာ....
ရက်စက်စွာ...၊ လှပစွာ တောက်လောင်နေခဲ့ကြတယ်....။
မျက်စိကို အထပ်ထပ် ပွတ်သပ်ကြည့်နေတုန်းမှာ....
ကမ်းနဲ့ နီးစပ်ဖို့ရာ ဝေးနေခဲ့သေးရုံမျှသာမကသေးပဲ
ကိုယ်တိုင်ပဲ ပျောက်ရှနေခဲ့မှန်းတောင်မှ မသိခဲ့ကြသေးတော့...
‘အပေး၊ အယူ’ ဆိုင်ရာ ‘သီအိုရီ’ကို သင်ကြားပေးဖို့....
စိတ်ပျက်စွာ လစ်ဟင်း၊ ပျက်ကွက်နေခဲ့ရတဲ့အထိ
တပ်မက်မှုတွေ ပေကျံနေခဲ့တဲ့ မျက်လုံးတချို့ကို....
အာခံဖို့ဆို... ငါ... သိပ်ကို ၀န်လေးခဲ့ရမိတယ်...။
‘ပျော့ညံ့ခြင်း’ ဆိုတာကို တတ်မြောက်ဖို့အတွက်
သင်ကြား၊ နာယူမှုအပိုင်းမှာ သိပ်များများမလိုအပ်လှပါဘူး....။
ခေါင်းကလေးကို ငြိမ့်တတ်ရင် လုံလောက်ပါပြီ...။
သေချာအောင်သာ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ကြိုးစားကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်....
ငါ ကိုယ်တိုင်ပဲ ‘သားကောင်’ ဖြစ်ခဲ့ရတာ...
ခဏ... ခဏနဲ့ ကြာလှရှိခဲ့ပေါ့....။
ချိုမြမြ စကားလုံးလေးတွေရဲ့ အကြား
ဖရို ဖရဲ... ပြိုလဲခဲ့ရတာများ....
အော့နှလုံးနာစရာ... ငါ့ အဖြစ်တွေကို...
‘ပုံရိပ် အစစ်နဲ့ အယောင်’ မသိနိုင်တော့လောက်အောင်
ကြေးမှုံပြင်ရဲ့ ‘ယာဇ်ကောင်’ တချို့ဟာ
မြင်လွှာတွေ အနည်းငယ် ချွတ်ယွင်းနေခဲ့ပေမယ့်
‘နယူတန်’ကို တရွတ်တိုက် ချိတ်ဆွဲထားဖို့ အမှတ်ရနေခဲ့...။
‘ဆန္ဒ’ ...ဆိုတဲ့ လှိုင်းတွေထဲ အတူတူ ကူးခပ်နေဆဲ...
ကမ်းလင့်မိခဲ့တဲ့၊ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ လက်တစ်စုံကို...
ပြိုလု ပြိုခါနီး ခပ်ဝါးဝါး အရိပ်တစ်ခုဟာ
ငါဟာ... တရိရိနဲ့ ညှင်းပန်းခံ ဖြစ်နေခဲ့ရပြီ....။
ငါ့ရဲ့ စိတ်ကို ပင်ပန်းစေလွန်းခဲ့ပါပြီ...။
ဝေချင်... ကြွေချင်တဲ့ ‘ဘ၀’တွေ...
တင်းမာချင်လွန်းစွာ တက်မိတဲ့ ချဉ်ခြင်းတွေ....
အသွားရှိ အပြန်မဲ့တဲ့ ‘ကန္တာရ’တစ်ခုမှာ
ငါဟာ... ကြိမ်ဖန်များစွာ သေရလိမ့်ဦးမယ်...။
နောက်ကျစွာ ရောက်လာတတ်တဲ့ သိတတ်မှုဟာ
‘နောင်တ’ ဆိုတဲ့ မြားတစ်စင်းအသွင်နဲ့
မိုက်တွင်းနက်စွာနဲ့ ဟက်ဟက်ပက်ပက် လှောင်ရယ်နေခဲ့ချိန်မှာ....
အဖြူရောင်လောကရဲ့ ‘ရနံ့’ တချို့ဟာ...
‘ပကတိ’ တန်ဖိုးကို တိုက်စားခြေဖျက်မယ့် အရာတွေ...
ထိုးစစ်ဆင်လို့သာ မောချင် မောသွားကြပါစေ
ငါဟာ... လေရူးမှာကြွေလူးရမယ့် ရွက်ခြောက်မဖြစ်သေးသမျှ...
ဖြစ်ချင်တဲ့ ‘ဆန္ဒ’ တစ်ခုသာ ငါ... ပျိုးထားလိုက်မိတော့တယ်...။
ကြိုးစား ထွန်ယက်ချင်နေခဲ့တာပါပဲ...။ ။
6th Feb; 2008
ပုံလေးကို ဒီနေရာလေး ယူသုံးပါတယ်ခင်ဗျာ...။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်လောက်က ကျွန်တော်ဘလော့ မရေးဖြစ်ခင်တည်းက ခင်မင်လေးစားခဲ့ရတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ တချို့ သိပ်မရောက်ဖြစ်တဲ့ဒီနေရာလေးမှာ တင်ထားတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်မိခဲ့ရင်း....
နောက်ပြီး... နာမည်လေးမြင်ဖူးရုံနဲ့ စိတ်ထဲမှာ နှစ်သက်မိရင်းသွားလည်ခဲ့မိတဲ့ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်လေးမှာ တင်ထားတဲ့ ကဗျာလေးရယ်...။ (အဲ့ဒီအစ်ကိုကို ကျွန်တော်က အရင်သွားပြီးမိတ်ဆက်ရင်း ရောက်ခဲ့ရတာပါ...။ ရောက်လည်းရောက်ခဲ့ရော ကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့ အတွေးတွေအများကြီးပေးတဲ့ ကဗျာလေးတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်နေလို့ အရမ်းဝမ်းသာခဲ့ရမိပါတယ်...။)
စတာတွေကိုပေါင်းပြီး... အခုလတ်တစ်လော ကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ စိတ်အခြေအနေလေးရယ်တို့နဲ့အတူ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကဗျာရေးတဲ့ မှတ်စုစာအုပ် အဟောင်းလေးကို ပြန်လှန်မိခဲ့ရင်း ဟိုးအရင်တုန်းက ရေးခဲ့မိတဲ့ ကဗျာရှည်လေး တစ်ပုဒ်ကို တင်လိုက်မိတာပါ...။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲ့ဒီ အစ်ကိုရော၊ အစ်မပါ...ကျွန်တော်နဲ့ မွေးဖွားတဲ့ ရာသီခွင်ခြင်းသွားတူနေပါတယ်...။(ကုမ်ရာသီခွင်ပါ...) အရင်တုန်းက တကယ့်ကို မသိခဲ့ရတာ အမှန်ပါပဲ...။ အဲ့ဒါကြောင့် အစ်ကိုနဲ့ အစ်မရော... ကျွန်တော့်အတွက်ပါ အမှတ်တရအဖြစ်တင်လိုက်မိပါတယ်...။ ပိုပြီးတိုက်ဆိုင်တာက ဒီကဗျာလေးကို ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့နေ့စွဲကို အမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်မိတော့ ‘ကုမ်’ရာသီခွင်ထဲမှာပါပဲ...။ အမှတ်မထင်တဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် အံ့သြခဲ့ရမိတာပါ...။ ဒီကဗျာလေးကို ကျွန်တော်မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ရက်စွဲကိုကြည့်မိတော့ နှစ်နှစ်သားပြည့်ဖို့ ရက်ပိုင်း၊ နာရီပိုင်းလေးပဲ လိုပါတော့တယ်ဗျာ....။ မှတ်မိတာတစ်ခုက အဲ့ဒီကဗျာလေးကို တစ်ညလုံး တစ်ထိုင်တည်း အပြီးထိုင်ရေးခဲ့မိတယ်ဆိုတာပါပဲ...။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဘာခံစားချက်နဲ့ ရေးခဲ့မိ သလဲဆိုတာ အခုအချိန်မှာ ဘယ်လိုမှ ပြန်စဉ်းစားလို့ မရတော့ပါဘူး...။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ထင်ခဲ့မိ...၊ ခံစားမိခဲ့တဲ့ အတွေးခံစားချက်တွေဟာ... အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်း မှိန်ဖျော့လာတတ်တာကတော့ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ ကိုယ်တွေ့ပါပဲဗျာ....။
သူငယ်ချင်း...ညီအစ်ကို မောင်နှမအားလုံး...ကုမ်ရာသီခွင်လေးမှာ... ကောင်းကင်က လုလင်ပျိုတစ်ဦး သွန်းလောင်းတဲ့ ရေစင်အေးတွေကြောင့် အေးမြလန်းဆန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ....။
(မှတ်ချက်...ကျွန်တော့် မွေးနေ့က မရောက်သေးပါဘူးနော်...။ မွေးနေ့ပို့စ်ကို နောက်မှ ရေးမှာမို့လို့ မွေးနေ့ဆုမွန် မတောင်းပေးကြပါနဲ့ဦးနော်....း))
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 7:12 PM
Labels: ရင်တွင်းဖြစ် ကဗျာ
ဒီလို ကဗျာရှည်လေး မရေးဖြစ်တာ တော်တော်ကို ကြာပြီ။
ဘာမှန်း မသိပေမဲ့ ကျနော် ဒီလို ကဗျာ မရေးနိုင်တာ ကြာပြီ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာတပုဒ်ပါ.. လေးစားပါတယ်...စကားလုံးတိုင်းမှာ အဓိပ္ပါယ် အပြည့်ရှိလိုက်တာ..။
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး အဖြူရောင်ဝိညာဉ် ကို အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်ပါစေ...။
ကဗျာက အစကနေအဆုံးအထိ စိတ်ကိုညှစ်ထားပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း ခေါ်သွားတယ်...
အဆုံးသတ်ရောက်မှပဲ သက်ပြင်းရှည်ကို မှုတ်ထုတ်လိုက်ရတော့တယ်...
ကိုဏီးကဗျာကိုဖတ်ရတာ စိတ်မောလိုက်တာ... :(
ကိုဏီးထွန်ယက်နေတဲ့ အဖြူရောင် ၀ိညာဉ်တစ်ခု အမြန်ဆုံးအသက်ဝင်လာနိုင်ပါစေ....
(ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ မဆိုးသေးပါဘူး...တစ်ရှူးဘူးများ ယူလာရတော့မလားလို့...
ကိုဏီးရေ....... ကဗျာလေးက တကယ့်ကို အသက်ဝင်တယ်။ ဒီလို ကဗျာရှည်လေးကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်နိုင်အောင် ရေးတတ်တဲ့ အကို့ကိုလည်း အားကျမိပါတယ်။ ကွန်မန့်တောင် မန့်ရတာ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် တော်တော်လုပ်တယ်။ မွေးနေ့ဆုကို မတောင်းနဲ့အုံး ဆိုတော့ ....း)
မတောင်းပေးသေးပဲ ပြန်သွားတယ်။ ပိုစ့်တင်မှ လာဆက်မန့်တော့မယ်။
ပုံထဲကလူနဲ့ ရန်ဖြစ်နေတယ်မှတ်လို့။။ မင်းမလုပ်နဲ့ ငါ့ဘာသာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေ။ :D
နောက်တာပါဗျာ။ ရင်ထဲက စူးစူးစိုက်စိုက်ရေးထားတဲ့ ကဗျာဖြစ်လို့ ထပ်တူခံစားရပါတယ်။ ဟေ့..ကိုဏီ ကြိတ်ငိုမနေနဲ့ဦးနော်။ ဟားးဟားး
ကောင်းကင်က လုလင်ပျိုတစ်ဦး သွန်းလောင်းတဲ့ ရေစင်အေးတွေကြောင့် အေးမြလန်းဆန်းနိုင်ပါစေ...ဆိုတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ ကိုဏီရေ...
စာလုံးတိုင်း ခံစားချက် ပြည့်နေတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ကိုဖတ်ရင်း လိုက်ဖတ် တဲ့ ကွန်မန့် ကို မရေးနိုင်တာ ခွင့်လွတ်ဗျာ.
ကဗျာဆန်ဆန်တွေ သိပ်မခံစားတတ်လို့ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်ရှည်ရှည် ရေးနိုင်တာ တော့ ချီးမွန်းရမယ် ။တော်ရုံ ခံစားချက် နဲ့ တော့ ရေးလို့မထွက်နိုင်ဘူးလေ ။
စာတွေ ကဗျာတွေ ကို ချစ်တတ်သူတဦး ရဲ့ စိတ်နှလုံးသား ဟာ ပိုနူးညံ့ မယ် လို့ တော့ ထင်မိတယ် ။
အားပေးလျှက်ပါ ဏလည ရေ ...
ကုန်ရာသီပါဗျာ.. ဒီလတကယ်ကုန်တယ်..အကြွေးထူတော့ မပူတော့ဘူး..အဟဲ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထုဆစ်ပြီး ယစ်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်တော့
ဒီဘက်ကိုလည်း အရိုးအရင်းလေး နဲနဲပါးပါး ပို့ပေးလိုက်စေချင်ပါတယ်...
ဒီကဗျာရှည်အတွက် ကွန်မန့်တစ်စုံတစ်ခုရေးခဲ့မယ်.. မှတ်ချက်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင် မလုံလောက်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်... ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တစ်ခုပဲပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်... အစ်ကိုဏီလင်းညို တကယ့်ကို တော်ပါတယ်... ဒီလို ကဗျာရှည်တစ်ပုဒ် ထုဆစ်နိုင်တဲ့ ခံစားချက်နဲ့ လက်စွမ်းကို တကယ်ပဲ မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်ဘူး....
ကဗျာကောင်းလေးဖတ်လိုက်ရလို့ကျေးဇူး... မွေးနေ့ကနီးပြီထင်ရဲ့... ကြိုပြောနော်
ကဗျာရှည်လေးကို လေးစားအားကျစွာ ဖတ်သွားတယ်နော်။
ကဗျာကိုတော့ သေချာမဖတ်သွားဘူး။ ကူးသွားတယ်ဗျာ။ အေးဆေးဖတ်ဖို့။
အင်ဂျင်းပြောတာ မှန်လိုက်တာ.... နောက်ဆုံးကြတော့ သက်မကြီးချပလိုက်တယ်.... ဒုန်း... မှတ်ကရော...
စောင်းပျောထားတာလား.... ဏလညရေ.... တငယ်ချင်းရဲ့....
ကဗျာရှင်လိုပါပဲ အတုအယောင်တွေကြားမှာ ဖြူစင်စွာ ရှင်သန် ချင်ပါတယ်။
အားကျတယ်အစ်ကိုရာ..ကျွန်တော်ကတော့ ခုထိမရေးနိုင်သေးဘူး အဲ့လိုကဗျာမျိုး..ရေးကြည့်ဖူးသေးတယ်..အရှည်ကြီးရေးထားလို့ ကဗျာရှည်ဖြစ်နေပေမယ့် အကြောင်းအရာတွေက ကဗျာထဲမှာ အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာဖြစ်နေတော့ ဘာထူးမှာလည်း.. ကဗျာရှည်ခေါ်ဖို့မှမကောင်းတော့တာ။ အစ်ကိုကဗျာလေးကတော့ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့ ထိထိမိမိရှိပါ့ဗျာ...
မေ့သွားလို့ မွှေးနေ့က နီးပြီလားအစ်ကိုရ..ပြောဦးလေဗျာ..
ရှင်းလင်းချက်ကို ဖတ်ချင်ဘူးဗျ။ ကဗျာပဲဖတ်ချင်တယ်။
ဒီလိုပဲ ရှေ့ကိုဆက်တိုးရမှာပေါ့ ညီလေးရာ
ဘဝနဲ့ရင်းပြီး နှလုံးသားနဲ့ဖြန့်ခင်းထားတဲ့ ကဗျာတပုဒ်မှန်းသိသာပါတယ် ညီလေးရေ...ကဗျာလေးကို လေဒလေးနက်နက် ဖတ်ရှုခံစားသွားခဲ့ပါတယ်ညီလေး
လှပသော အနာဂတ်များကို ဖန်တီးပိုင်ဆိုင်နိုင်သူဖြစ်ပါစေလို့ ရောက်လာတော့မယ့် မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်ကွာ...
ကဗျာရဲ့ အဆုံးမှာ နှောင်ထုံးသွားရတယ်...
စာလုံးတွေ သုံးချက် အဆုံးသတ်လှပုံက
အစ်ကိုရေ... ပြောမပြတတ်အောင်ကို ဖြစ်သွားတယ်...
အခေါက်ခေါက် အခါခါလည်း ပြန်ဖတ်မိတယ်...
ဒီလိုကဗျာရှည်ကြီးကို ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့နဲ့ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်...
ကျွန်တော့် ဘ၀အတွက်တော့ ကဗျာကောင်းတပုဒ် ရလိုက်ပြီဗျာ...
လာလည်တာ နောက်ကျလို့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ခင်ဗျာ...
ကျွန်တော် မအားတာရယ် ... စက်သုံးလို့ မရတာရယ်ကြောင့်ပါ...
း) အခုမှလာဖတ်ဖြစ်တာခွင့်လွှတ်ပါဗျား)
ဆပ်ပြာပူပေါင်းတစ်လုံးဆိုရင်.. မလေးလည်း ကူဖောက်ပေးလိုက်မယ် :P
နောက်ဆုံးအပိုဒ်က သံချ ကို အရမ်းကြိုက်တယ်။
‘နယူတန်’ကို တရွတ်တိုက် ချိတ်ဆွဲထားဖို့ အမှတ်ရနေခဲ့
အဲနေရာက တော့သဘောကျဆုံးဘဲ တစ်ပိုဒ်လုံးကောင်းတယ်ဗျာ
နောက်လည်းခုလိုများများရေးသား ဖော်ကျူးနိုင်ပါစေ အားပေးလျက်ပါ
လိုချင်နေတဲ့ ဆန္ဒတွေကို ရပ်တန့်သွားစေတဲ့ အရာကို အလိုချင်ဆုံးပဲ ဆိုရင် ကိုလင်းညို ဘာပြောမလဲ ???
အပိုဒ် နံပါတ် (၅) ကို သဘောကျတယ်ဗျာ။
ကဗျာရှည်ထဲမှာ ပါတဲ့အပိုဒ်တိုင်း အနှစ်သာရ အပြည့်ပဲ။